Sida loo dar Music inay iPhone ka Computer kale
> Resource > iPhone > Sida loo saar Music inay iPhone ka Computer kale
"Ma jiraa qof ku gartaan si loo dar music inay iPhone ka computer ka duwan? Waxaan u baahanahay inaan music inaan iPhone 5 ka computer kale. Si kastaba ha ahaatee, markii aan sameeyo, digniin ka soo baxay, isagoo sheegay inay masixi doono xogta on my iPhone. Fadlan caawi "
Guud ahaan, aad iPhone ahayd oo kaliya in ay hagaagsan oo ka mid computer. Haddii aad isku daydo in aad ku darto music aad iPhone ka computer kale, doonistii pop-up ka soo baxa, aad ka digay in xogta aad ku iPhone laga tirtirayaa. Haddii aad guji 'Haa' , markaas heeso cusub la synced doonaa iPhone. Laakiin waqti isku mid ah, aad waayi doonto heesaha oo dhan, videos, iyo sidoo buugaagta ka iPhone.
Waa hagaag, workarounds weli ka jiraan heeso daro si iPhone ka computer kale oo aan tirtiro faylasha asalka on iPhone. Lugood sokow, waxaa jira dhowr qalab suuqa si ay heesahaaga iPhone ah wareejiyo ka computer kale. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo aad Wondershare TunesGo. Waa qalab tayo leh, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad music aad iPhone ka computer kale oo aan syncing. Kuwa soo socda waa 2 tallaabooyin ay ku dari music inay iPhone ka computer kale la TunesGo Wondershare.
Download Wondershare MobieGo ee macruufka version maxkamad ay ku riday music on iPhone ka computer kale.
Fiiro Gaar ah: Waxaan la siiyaa labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) version maxkamad halkan. Waxaad dooran kartaa mid ka saxda ah sida uu nidaamka qalliinka computer aad. By jidkii, TunesGo (Windows) shaqeeyaa PC orodka ee Windows 8, Windows 7, Windows Vista, iyo Windows XP. MobileGo ee macruufka (Mac) hadda taageertaa Mac socda ee Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6.
Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer iyo abuurtaan TunesGo Wondershare. Ka dib markii ay si guul ah ku xira, aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa weyn ee TunesGo ay info aasaasiga ah.
Tallaabada 2. Ku dar music aad iPhone ka computer kale
Riix 'Media' dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn. By default, furmo cusub, tab ugu horeysay waa 'Music'. Oo waxaa halkan, heesaha oo dhan iPhone aad waxaa lagu soo bandhigaa. On top ah, waxaad ka arki kartaa shay 'dar'. Riix saddexagalka waxaa ku hoos dooro 'dar dar File ama Folder'. Daaqadda dabamariyay kor, songs dooro on your computer iyo iyaga dajiyaan adigoo gujinaya 'Open'. Taasi waa.
Eeg, waa mid aad u fudud in ay ku daraan music inay iPhone ka computer kale. Waxa aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi ku xiran tahay sida badan heeso aad ku daray ka kombiyuutarka si aad iPhone. Waxaana jira waxyaalo badan oo aad u fiican oo ku saabsan TunesGo, oo noloshaada mobile inta badan ka sahlan ka dhigi doonaa. Raadi iyaga naftaada by hadda!